Okpukpo ndi mmadu nke Peru | Akụkọ Njem
Okpukpo ndi mmadu nke Peru
Ndị njem na ndị njem | | America, omenala, Ebe njegharị
Ihe nkpuchi Puno
Ọzọ nke ọkọlọtọ nke Peruvian crafts bụ masks, nke ejiri kemgbe oge gara aga iji mee ihe dị ka njikọ dị nsọ na iji jikọta ya na mbara ala nke ihe omimi. Na Peru, mkpakọrịta ya na agba egwu ọdịnala dị omimi. Ọtụtụ agba egwu dịka diablada, morenada na tuntada na-etinye ihe nkpuchi iji mara agwa ha.
Site na pre-Hispanic Peru, ndị nkpuchi nke ọdịnala Chimú na Mochica, eji ọla edo, ọla ọcha na ọla kọpa. Ka ọ dị ugbu a, eji ihe dị iche iche dịka osisi, plasta, akpụkpọ atụrụ, tin, ntupu waya na akwa glued.
En ọtụtụ, Ihe nkpuchi bụ akụkụ dị mkpa nke ememme Virgen de la Candelaria. N'ime ihe niile, nke a maara nke ọma bụ nkpuchi nke eze ekwensu, nke na-etinye okpueze ọlaedo, enweghi oke ma nwee obere isi 7 nwere mpi na dragọn, nke na-anọchite mmehie ndị isi. Nwanyị ekwensu na-eyi ọmarịcha mma na mpi abụọ na ntutu ọla edo ya. A na-eji ọla kọpa mee ihe nkpuchi abụọ ahụ. Onye ozo anakpoputara bu eze ojii, agwa sitere na Morenada, onye na-ebu ọkpọkọ n'etiti ezé ya, nwere ihu gbara ọchịchịrị, egbugbere ọnụ dị ala nke ukwu na imi sara mbara.
En Cuzco, Ihe nkpuchi bụ akụkụ nke Fiesta de la Virgen del Carmen, na Paucartambo. A na-eme nkpuchi na ndabere nke nkedo na akwụkwọ mmiri. A na-ahụta ihe nkpuchi ahụ maka njirimara ha dị ọcha nke ndị ọcha na-acha anụnụ anụnụ, afụ ọnụ, nnukwu imi, na ntụpọ polka. Nwekwara ike ịhụ mkpuchi nke nnukwu ọnụ ọchị na asụsụ dị iche iche yana nkpuchi ojii nwere njirimara ọla edo na anya mmiri na-acha anụnụ anụnụ. Fọdụ agba egwu nke gụnyere iji ihe nkpuchi bụ contradanza, caporal na machu.
En Cajamarca, ihe nkpuchi bụ akụkụ nke carnivals. A na-eme nkpuchi na ndabere nke waya na ihe nkpuchi.
Ozi ndi ozo: Catacaos: Isi obodo nke nka na Peruvian seasoning
Foto: Anya Anya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Okpukpo ndi mmadu nke Peru
Fauna na Flora na ndagwurugwu Colca